Rafael Braga Vieira: Endriky Ny Fanavakavaham-bolonkoditra Napetraky ny Lalàna Sy Ny Fahantrana Natao Ho Heloka Ao Amin’ny Fitsarana Breziliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2017 7:07 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Français, Português, Español, Italiano, English
Sora-baventy tao aminà fihetsiketsehana no fanohanana an'i Rafael Braga Vieira tamin'ny 2014. Sary: Mídia Ninja/Flickr, CC-BY-NC-SA 2.0
Voaheloka dimy taona an-tranomaizina i Rafael Braga taorian'ny nisamboran‘ny polisy azy tao aminà fihetsiketsehana lehibe tany Rio de Janeiro tamin'ny 20 Jona 2013. Vao feno 25 taona tamin'io taona io, tsy nanan-kialofana i Braga ary nanangona akora azo averina ampiasaina mba hivelomana. Nilaza izy fa tsy nahalala mihitsy hoe nisy fihetsiketseham-bahoaka akory. Rehefa nahita tavoahanginà fanadiovana fery sy “eau de javel” teny aminy ireo polisy, dia niampanga azy ho nitondra zavatra mipoaka, ary voaheloka talohan'ny faran'ny taona izy.
Braga no hany olona nalefa tany am-ponja noho ny hetsi-panoherana tamin'ny Jona 2013, nefa ity nahazo azy ity dia vao fanombohan'ny tantara maizina izay lazain'ireo mpikatroka sy ireo manampahaizana manokana ankehitriny ho maneho ny fanavakavaham-bolonkoditra napetraky ny rafi-pitsarana Breziliana sy ny fanaovana ny fahantrana ho heloka ao amin'ny firenena .
Nijanona tany am-ponja hatramin'ny Desambra 2015 i Braga, rehefa navelan'ny fitsarana hiasa any ivelany mandritra ny ambin'ny saziny tao amin'ny tranon'ny reniny tany Rio, mitondra bracelet elektronika. Na izany aza, nosamborin'ny polisy indray izy iray volana taty aoriana noho ny fitondrana rongony “marijuana” 0.6 grama sy afomanga (ilay karazany ampiasain'ny mpanondrana zava-mahadomelina mba hanairana ireo andian-jiolahy rehefa miditra ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny polisy).
Tamin'ny 20 Aprily 2017, voaheloka noho ny fanondranana zava-mahadomelina i Braga, ary tamin'ity indray mitoraka ity nosazian'ny fitsarana 11 taona sy telo volana am-ponja izy, na teo aza ny fampielezan-kevitra mafy (ny fahatelo taonany amin'izao fotoana izao) nataon'ireo mpikatroka izay im-betsaka nanipika ny fifanoherana sy ny tsy fetezan-javatra tamin'ireo fitsarana roa natao an'i Braga.
Ilay mpitsara tamin'ilay fitsarana voalohany tamin'ny 2013 dia toa tsy niraharaha ny tatitra ara-teknika avy amin'ny sampan-draharaham-panjakan'i Rio De Janeiro miandraikitra ny baomba izay nanambara fa “fahafahana mipoaka faran'izay kely indrindra” no nananan'ilay ranon-javatra fanadiovana izay nentin'i Braga, amin'ny ampahany satria vita amin'ny plastika ireo tavoahangy, nefa raha ny tokony ho izy, ny baomba lasantsy dia atao anaty tavoahangy fitaratra.
Nolavin'i Braga ireo fiampangana izay nitarika ho amin'ny fisamborana azy fanindroany tamin'ny 2016, niampangany ireo polisy ho nanao herisetra taminy ary namorona porofo sandoka — zavatra tsy dia vaovao ao amin'ny sampam-pitsikilovana Breziliana, izay matetika idarohana ireo voarohirohy amin'ny fiampangana ireo mpivarotra zava-mahadomelina.
Tamin'ny fitsarana faharoa, nailiky ny fitsarana ny iray amin'ireo vavolombelona nantsoina ho fiarovana an'i Braga (mpifanolo-bodirindrina izay nanamarina ny fitantarany ny zava-nitranga) satria ilay mpifanolo-bodirindrina dia nanana “fifandraisana ara-pianakaviana” tamin'i Braga. Ireo dimy vavolombelon'ny fampanoavana dia polisy izay samy manana filazana mifanohitra. Ohatra, ny polisy iray milaza fa nentina tany amin'ny tobin'ny polisy tao anatin'ny fitoeran'entan'ny fiara ny polisy i Braga, raha nilaza kosa ny hafa nilaza fa napetraka tao amin'ny seza tao aoriana izy.
Mahavariana, nandà tsy hijery ny ampahan'ilay lahatsary fanarahamaso avy amin'ny fakàntsary teo amin'ny toerana nisamborana an'i Braga ihany koa ilay mpitsara, nilaza fa “tsy ilaina amin'ny tsoakevitr'ilay raharaha.” izany.
Maro amin'ireo mpahay lalàna koa no nitsikera ilay sazy, nilaza fa ny fijanonana am-ponja mihoatra ny 11 taona dia sazy henjana loatra ho anà fitazonana rongony kely. Ponte Jornalismo, haino aman-jery iray tsy miankina izay nanaraka akaiky ireo fitsarana roa, dia nitantara tranga mitovy amin'io niafara taminà sazy moramora kokoa — toy ny tamin'ny nisamboran'ny polisy lehilahy 18 taona noho ny fitondrana marijuana 25 grama. Ity olona voaheloka ity dia nijanona iray andro monja tao am-pigadrana, talohan'ny nanilihan'ny mpitsara iray ny fanamelohana ny fanondranana zava-mahadomelina. Araka ny tranokala G1, taty aoriana dia niaiky ny voampanga fa nahazo fanampiana noho ny rainy izay manana fifandraisana maro izy, izay naman'ny mpitsara iray hafa.
Ny lalànan'i Brezila momba ny zava-mahadomelina izay maha-be adihevitra dia manome alàlana ny fitsarana mba hijery ireo voampanga amin'ny fomba tena samy hafa. Raha nohalalahina ny fampiasana ny zava-mahadomelina, tsy manome famaritana mazava ny lalàna momba ny maha-samy hafa ny “fampiasana” sy “fanondranana” ilay lalàna, mamela ny fanapahankevitra ho an'ny polisy sy ny fitsarana isaky ny toe-javatra tsirairay mitranga. Misy mpahay lalàna sasany milaza fa, raha ny marina, ilay fiteny manjavozavo hita ao anatin'ireny lalàna ireny no tena manamafy ilay fitsarana an-tendrony manavakavaka ao amin'ny rafi-pitsaràna any Brezila, izay ireo olona mahantra hafa volon-koditra no hita kokoa mety ho voaheloka noho ny fanondranana zava-mahadomelina.
David Miranda, mpanolotsainan'ny tanàna avy amin'ny antoko ankavia, Sosialisma sy Fahafahana ao Rio de Janeiro, nampitaha ny fitsarana an'i Braga tamin'ny tranga hafa nalaza ratsy tany Brezila tamin'ny 2013, tamin'ny polisy nahita Kokaina 450 kilograma nipetaka taminà angidimby an'ny solombavambahoaka sady mpandraharaha, Gerais Gustavo Perrella (zanaky ny loholona Zezé Perella). Nosamborin'ny polisy ny mpanamory ilay angidimby (mpiasan'ny fianakaviana Perrella) ary nohelohiny ho nanondrana zava-mahadomelina, no sady tsy niraharaha ny fianakaviana Perrellas ireo mpampanoa lalàna.
- pinho sol (ranon-javatra fanadiovana) = 11 taona any am-ponja
– Kokaina 450 kg taminà angidimby iray = fanenjehana araka ny lalàna nampirimina # FreedomforRafaelBraga
Rafael Braga V. mitsangana eo akaikin'ny soratra mivaky hoe, “Ianao mijery fotsiny avy any ankavia miankavanana, ny fanjakana manorotoro anao hatrany ambony ka hatrany ambany ” [Niely patrana tao amin'ny haino aman-jery sosialy ity sary ity. Nalaina tamin'ny 20 Novambra 2014, tamin'i Braga tao anatin'ny fiainana misokatra amin'ny antsasany, satria niverina tany am-ponja izy isaky ny avy miasa tontolo andro. Voasazy noho ny firaisana tsikombakomba izy ary natokan-toerana nandritra ny 10 andro]
Nandritra ny herinandro lasa iny, maro ny mpampiasa aterineto no naneho ny hatezerany noho ilay fanamelohana vaovao an'i Braga, anisan'izany ny mpisolovava sady Profesora Antônio Pedro Melchior:
Ao anatinà firenena izay ahitana fanitsakitsahana zon'olombelona ataon'ny sampandraharahan'ny polisy, izay ny ankamaroan'ny mponina dia milaza fa tsy matoky ny polisy, dia tsy azo ekena ny fanamelohana miorina fotsiny amin'ny tenin'ny polisy.
Nanoratra tao amin'ny Facebook koa ny solombavambahoaka Federaly sady mpikatroka mpiaro zon'olombelona, Jean Wyllys:
Efa vosoratra ny tantara. Nanao araka izay efa nampoizina fotsiny ny mpitsara.
Nomeny an'i Rafael ny didim-pitsarana. Ary nanao toy izany koa isika rehetra. Raha namintina ny fahafaham-baraka lalin'ny fahantràna Breziliana amin'ny fanamelohana lehilahy mainty hoditra iray indray, nosoratan'ilay mpitsara ho an'izay natao hiantefany ny lalàna.
Tao amin'ny Twitter, nomelohin'ny Amnesty International ilay didim-pitsarana:
“Tsy misy na iray aza amintsika afaka hangiana amin'ny fieritreretana fa voasazy amin'ny heloka tsy nataony izy”
Maro ireo fihetsiketsehana ho fanohanana an'i Braga natao tao Rio de Janeiro, São Paulo, ary hatrany Orugoay aza. Tamin'ny 24 Aprily, olona an-jatony koa no nanatevin-daharana ny fiaretantory tao São Paulo ho fanoherana ilay sazy vaovao fampidirana am-ponja.
Fihetsiketsehana tany São Paulo ho an'ny fanafahana an'i Rafael Braga. Sary an'i Daniel Arroyo sy ny Ponte Jornalismo, nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Afaka mahita ireo sary avy amin'ny fihetsiketsehana tany São Paulo ao amin'ny tranokalan'ny Ponte Jornalismo sy ny pejy Facebook-n'ny Mães de Maio ianao. Ary koa, nisy lahatsary roa an'ireo fihetsiketsehana nalefa ao amin'ny pejy Facebook-n'i Alma Preta. Ao amin'ny Facebook, namoaka ny fandaharam-potoana feno (amin'ny teny Portiogey) maneho ilay tantara ratsin'i Rafael ny Pela Liberdade de Rafael Braga Vieira (Ho an'ny Fanafahana an'i Rafael Braga Vieira), nanomboka tamin'ny fisamborana azy voalohany tamin'ny 2013 ary miafara amin'ny fanamelohana azy tamin'iny volana Aprily iny.